Komishinar Mitikkuu: ''Gogiinsa caalaa walitti bu'iinsatu hedduu qe'eerraa buqqaase'' - BBC News Afaan Oromoo
Komishinar Mitikkuu: ''Gogiinsa caalaa walitti bu'iinsatu hedduu qe'eerraa buqqaase''
22 Hagayya 2018
Image copyright MAHEDER HAILESELASSIE TADESE
Goodayyaa suuraa Ijoollee fi harmoolii qe'eesaaniirraa buqqa'anii deeggarsa barbaadan
Itoophiyaatti sababa walitti bu'insaa fi goginsaatiin lakkoofsi namoota harka mootummaa eeggatanii dabalaa dhufusaa obbo Mitikkuu Kaasaa, komishinerri Komishiinii Hoggansa Sodaa Balaa Biyyaalessaa BBC'tti himaniiru.
Sababa walitti bu'insa naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumameen mootummaan birrii biliyoona lama ramaduun hojjechaa jira jedhaniiru obbo Mitikkuu.
Bara 2010 ALI kanatti baajatni namoota sababa garagaraatiin qe'eesaanirraa buqqa'an deeggaruuf ramadame akka waliigalaatti Birrii biiliyoona 6 jedhan.
Akka Obbo Mitikkuun jedhanitti, ''bara kana namoota sababa goginsaan deegarsa barbaadan caalaa, namoota sababa walitti bu'insaan qe'eesaaniirraa buqqa'antu deeggarsa guddaa barbaadaa jira''.
Rakkoo Gujii fi Geedewoo dagatame
"Buqqaatonni Gujii fi Geediyoo dagatamaniiru" Waldaa Fannoo Diimaa
Namootni Jigjigaa irraa baqatanii daandiiwwan magaalaa Finfinnee jiran deeggarsa argataa hin jiran komii jedhu ilaalchisees Obbo Mitikuun waa'ee dhufaatii isaanii ilaalchisee odeeffannoo ETV irraa arganneen adda baasnee deeggarsa kennineera jedhan.
Haa tahu malee amma gidduugalummaa raayyaa ittisa biyyaa fi jaarsolii biyyaan haalli Jigjigaa keessa jiru akka tasgabbaa'u waan taheef gara Jigjigaatti akka deebi'an itti himameeras jedhu.
Erga deebi'aniis deeggarsi achumatti waan isaaniif taasifamuuf as dhufuu hin barbaachisu jedhan. Dabalataan achumatti hojiin deebisanii qubachiisuu fi ijaaruu waan hojjetamuuf asitti deeggarsa kennuun hin barbaachisu jedhan.
Komishinichi osoo bakka jiraniitti deeggarsa dhiyeessuu hin danda'u tahe, akkasumas haalli nageenyaa naannichaa achi isaan tursiisuu hin danda'u yoo tahe qofadha achii bahuun kan barbaachisu jedhan.
Furmaati xumuraas haala nageenyaa naannichaa mirkaneessuufi uummata kana deebisanii ijaaruudha jedhan.
Hanqinni baajataa ammayyuu rakkoo tahuu danda'a sababnisaas qabeenya jalaa barbadaa'e, kan akka manaa deebisanii bakka buusuu waan barbaaduuf jedhan obbo Mitikkuun.
Goodayyaa suuraa 'Walumaagalaan lakkoofsi namoota deeggaramaa jiranii miiliyoona 2.8 gaheera'
Osoo nageenyi biyya keessa jiraaatee baajatni guddaan kun hojii misoomaaf oola ture jedhan obbo Mitikkuun.
Dabalataanis sababa gogiinsa Baha Itoophiyaatti waggoota lamaan darban keessa uumameen namootni kuma 600 deegaramaa jiraachuus obbo mitikkuun himaniiru.
Sababa walitti bu'insa naannoo somaaleetti uumamee dabalatee Itoophiyaa keessa lakkofsi namoota sababa walitti bu'insaan buqqa'anii miliyoona 2.2 akka tahan obbo mitikkuun himaniiru.
Walumaagalaan lakkoofsi namoota deeggaramaa jiranii miiliyoona 2.8 gaheera jedhan.
Mootummaan bara 2008 irraa eegalee bajata guddaa ramaduun namoota sababa garaagaraan qe'eesaaniirraa buqqa'an gargaaraa jira.
Bara 2008 keessa qofa baajata mootummoota naannoolee,uummataa fi dhaabbilee gargaarsaa osoo hin dabalatiin mootummaan Federaalaa qofa birrii Biiliyoona 16 ramaduun deegarsa gochaa tureera jedhan obbo mitikkuun.
Dabalataan bara 2009 goginsa naannoo horsiisee bulaatti uumameen mootummaan bajata Birrii Biliyoona 8.5 ramaduun deegaraa tureera.
Walitti bu'insa, buqqa'uufi deebii mootummaa Federaalaa
10 Caamsa 2018
12 Adooleessa 2018
Walitti bu'iinsi sabaa Itoophiyaa ni yaaddessaa?
Wantoota ja'an badaa jiraachuusaanii dhalli namaa dagate
Awubaameyaang haala hin eegamneen akka Arsenaal mo'atu taasise
Osoo booyyee adamsaa jiranii ilmi dhukaasee abbaa ajjeese
Dirree Dhawaatti maaltu ta'e?